Supercomputer Oo Saadaaliyay Kooxda Ku Guuleysan Karta Horyaalka Premier League
Home Horyaalka Ingiriiska Supercomputer oo Saadaaliyay Kooxda ku guuleysan karta Horyaalka Premier League
Supercomputer ayaa kooxda Man City u saadaaliyay ku guulaysiga horyaalka premier League xilli ciyaareedkan xilli ay sii wado qaab ciyaareedkooda cajiibka ah.
Leicester ayaa loo saadaalinayaa inay ku dhameysan doonto kaalinta afaraad, taasoo la micno ah in Chelsea – oo bedeshay Frank Lampard laguna bedelay Thomas Tuchel bishii Janaayo – la filayo inay ku dhameysato booska shanaadk.
Blues ayaa la filayaa inay ku dhameysato kaalinta shanaad iyagoo hal dhibic ka hooseeya Foxes Brendan Rodgers.
West Ham ayaa loo saadaalinayaa inay ku dhameysan doonto kaalinta lixaad, iyadoo ka horeysa kooxda Jose Mourinho ee Tottenham – halka Everton iyo Arsenal lagu wado inay ku dhameystaan ​​kaalinta 9aad iyo tobnaad.
Kooxda Mikel Arteta ayaa heysata kaliya FOUR PER CENT fursad ay ku gali karaan booska Champions League xilli ciyaareedkan.
Previous articleBayern Munich oo kula dagaalameysa Manchester United daafaca midig ee Norwich City
Next articleJurgen Klopp oo ka hadlay ka tagista Shaqada Kooxda Liverpool iyo in uu nasiino sameeyo